pokhara news Archives – Page3of 30 – Samacharpati
पोखरा, १ भदौ । एसटी क्रियशन म्यानेजमेन्ट प्रा.लि र एपी इन्टरटेन्मेन्ट प्रालीद्वारा आयोजित प्रथम कलेज स्तरिय ‘हिमाअज कप २०१९’ फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि हिलपोईन्ट बोर्डिङ स्कुलले जितेको छ । पोखराको भाटभटेनी स्थित स्काई स्पोर्टस्मा शनिबार सम्पन्न फाईनल खेलमा पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्टलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै हिलपोईन्टले उपाधि जितेको हो । उपाधिसँगै हिलपोईन्ट बोर्डिङ स्कुलले […]
हेमजा, २९ साउन। पोखरा–२५,हेमजा स्थित विष्णुपादुका क्लवले हरितालिका तिजको अवसरमा गर्न लागेका विभिन्न प्रतियोगिताको तयारीलाई तिब्रता दिएको छ । क्लवले तिजको अवसरमा तेस्रो बिष्णु तिमिल्सिना स्मृति हेमजा सेभेन ए साइड फुटबल प्रतियोगिता तथा हरीतालिका तिजगीत प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । जसअनुसार हरीतालिकाको दिन भदौ १६ गते तिजगीत प्रतियोगिता तथा भदौ १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म फुटबल प्रतियोगिता […]
पोखरा, २३ साउन । कालिगण्डकी डाइभर्सनमा आफुहरुको सहमति नरहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभएको छ । गएको सोमबार प्रदेश नं. ५ को बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सबैलाई मनाएर डाइभर्सन बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्को विष्णु, ब्रम्हा महेश्वर ल्याए पनि सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । कालिगण्डकी डाइभर्सनकोको […]
पोखरा महानगरका वडा कार्यलयहरुमा चोरी रोकिएन, सुरक्षा गार्ड राख्ने तयारी गर्दै महानगर
समाचारपाटी, पोखरा, २३ साउन । पोखरा महानगरपालिकाका वडा कार्यलयहरु निरन्तर चोरको निसानामा परिरहेका छन् । ११ वटा वडा कार्यालयहरु चोरी भईसक्दा पनि कसले चोर्यो ? किन चोर्यो ? चोरी भएका सामाग्री कहाँ छन् । पोखरेली जनताका महत्वपुर्ण तथ्यांक र डाटा कता छन् ? के भईरहेको छ भन्ने विषय अहिलेसम्म पत्ता लगाउन प्रशासनले सकेको छैन । […]
पोखरा, २३ साउन । साझा पार्टीले भदौको दोस्रो साता कास्की जिल्ला सँयोजक सहित महानगर सँयोजक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । एक विशेष समारोहका बीच जिल्ला र महानगर सँयोजक घोषणा हुने साझा पार्टी, गण्डकी प्रदेश शाखाले जनाएको छ । पार्टीले सोही दिन कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवारी समेत घोषणा गर्नेछ । ‘यो […]
पोखरा, २३ साउन । पोखरा महानगरपालिकाले बाख्रापालक किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का ५० जना किसानलाई अनुदान रकम दिएको हो । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले किसानहरुलाई ४० हजारका दरुले अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । ८ वटा भन्दा बढी बाख्रापालक किसानलाई महानगरले खोर निर्माण […]
पोखरा, २३ साउन । उद्देशय विपरित संचालन भएका पोखराका स्कुल बसलाई कारबाही गरिएको छ । भाडा प्रयोजनका निमित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई निजि प्रयोगमा सवारी संचालन भएको पाइएपछि कारबाही भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले सार्वजनिक ‘कालो प्लेट ‘ मा दर्ता भई विद्यार्थी ओसारपोसार गरिरहेको अवस्थामा भेटीएका ६ वटा बस नियन्त्रणमा लिएको छ। […]
पोखरा, १७ साउन । सिद्धार्थ बैंकले पोखराको सराङ्कोट स्थित लब्ली डाँडामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व सँगसँगै सरकारले ल्याएको एक कर्मचारी एक फलफुलका बोट रोपण राष्ट्रिय विभूति सहिद पार्क मेत्लाङमा सिद्धार्थ बैंकले शुक्रबार बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । पोखरा शाखाका शाखा प्रबन्धक सुरज कुमार जोशीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पोखरा […]